बाहुनडाँगी (झापा) । पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास हुँदै गरेको इलामको रोङ गाउँपालिका र मेचीनगरको सीमानामा रहेको झरनामा रमाउन जाने पर्यटकका कारण बाहुनडाँगीका खानेपानी आयोजनाहरु प्रदूषित भएका छन् ।
झरनामा नुहाउन जाने आन्तरिक पर्यटकहरुले जथाभावी फोहोरमैला गर्दा साविक बाहुनडाँगीका साना तथा ठूला खानेपानी आयोजना प्रभावित भएका हुन् । मेचीनगर १ र २ (केही भाग) बाहुनडाँगीमा साना तथा ठूला गरी करिब १९ वडा खानेपानी आयोजना सञ्चालित छन् । ती सबै आयोजनाको मुहान भने त्यही झरनाको पानी हो ।
मुहानमा पर्यटकहरु रमाउने नाममा फोहोरमैला गरिदिँदा दूषित पानी उपभोक्ता पिउन बाध्य भएको मेचीनगर वडा नं. १ का बासिन्दा बताउँछन् । मेचीनगर १ को सिरानमा पर्ने तिरिङ खोला र निन्दा खोलाको मुहानमा पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकहरु ठूलो संख्यामा नुहाउन जाने गरेका छन् ।
विशेषगरी शनिबारका दिन झरनामा नुहाउन जानेको भीड हुन्छ । रमाइलो गर्ने नाममा पर्यटकहरुले खाएर जथाभावी फ्याँक्ने फोहोरले मुहान क्षेत्र दुर्गन्धित भएको छ । वियरका बोतल, प्लाष्टिकजन्य वस्तु, चुरोटका बट्टाहरुले मुहान क्षेत्र भरिएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर बाहुनडाँगीका करिब तीन हजार उपभोक्तामा परेको ती खानेपानी आयोजनाहरुले बताएका छन् ।
पर्यटकीय गन्तव्यलाई व्यवस्थित गरेर शुद्ध पानी वितरणमा पहल गरिदिन स्थानीय सरकार मेचीनगरलाई आयोजनाहरुले आग्रह गरेका छन् । ‘मुहानमा फोहोर गरिदिँदा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको छ,’ स्थानीय उपभोक्ता तिलजा देवानले भनिन्, ‘हामीले पानी होइन, दिसापिसाव खाइरहेका छौँ ।’ उनले पहिलो सर्त मानिसको स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई बुझेर पर्यटन विकासमा लाग्न पनि स्थानीय सरकारसँग आग्रह गरिन् ।
मेचीनगर १ को सिरानमा पर्ने तिरिङ खोलाबाट गोकुल खानेपानीसहित अन्य साना पाँचवटा खानेपानी सञ्चालित छन् । यस्तै, निन्दा खोलाबाट बाहुनडाँगी, श्रीनन्दा, जिल्ला विकास खानेपानी, साङपाङ खानेपानीलगायत १० वटा आयोजना वर्षौँदेखि सञ्चालित छन् । ती आयोजनाबाट वितरित पानी साविक बाहुनडाँगीका करिब ३ हजार उपभोक्ताले उपभोग गर्दै आएका छन् ।
पुराना खानेपानी आयोजना भएकाले पनि पानी सामान्य फिल्टरराइज गरी उपभोक्तालाई वितरण भइरहेको छ । तर, मुहान फोहोर हुँदा पानी दूषित भई उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेको मेचीनगर वडा नं. २ का वडा सदस्य सुरेश घिमिरेले बताए ।
बाहुनडाँगी खानेपानीका अध्यक्ष सनतकुमार अधिकारीले मुहान दूषित हुँदा उपभोक्ता पानी खान नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताए । ‘उपभोक्तालाई शुद्ध पानी वितरण गर्नु हाम्रो पहिलो दायित्व हो,’ उनले भने, ‘तर हामीले सकिरहेका छैनौँ ।’ पर्यटन विकासलाई व्यवस्थित नगर्ने हो भने उपभोक्ता प्रतिकारमा उत्रने उनले चेतावनी दिए ।
यस्तै, सन्यासी खानेपानीका अध्यक्ष लोकनाथ लामिछानेले घुम्ने र खाने ठाउँको निश्चित मापदण्ड तोकेर खानेपानीका मुहान सफा गर्नतर्फ लाग्न स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरे ।
स्थानीय उपभोक्ता टेकचन्द्र फुँयलले पर्यटनसँगै विकृति बढेको बताए । उनले आन्तरिक पर्यटन विकास गर्दै प्रदूषण नियन्त्रण गर्न निषेधको मापदण्ड बनाउन स्थानीय सरकारसँग आग्रह गरे ।
नन्दा खानेपानी अध्यक्ष इन्द्र ढकाल, निन्दाटार खानेपानीका अध्यक्ष गौरी आचार्य, स्थानीय दिपेश खड्कालगायतले पानीको स्रोत संरक्षण गरिएन भने भावी दिनमा समस्या उत्पन्न हुने बताए ।
पर्यटन विकास र शुद्ध खानेपानीको व्यवस्थापन गर्छौँ- मेचीनगर प्रमुख आचार्य
पर्यटन क्षेत्रको विकासँगै पानीको मुहानको उचित व्यवस्थापन गर्ने विषयमा मेचीनगर प्रमुख विमल आचार्यसँग शुक्रवार खानेपानी आयोजनाका अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय सरोकारवालाबीच छलफल गरिएको छ ।
मेचीनगर वडा नं. १ का वडाध्यक्ष पासाङ तामाङको अध्यक्षतामा भएको छलफल कार्यक्रममा मेचीनगर प्रमुख आचार्यले पर्यटन विकाससँगै शुद्ध खानेपानी वितरणमा लाग्नु पर्ने बताए । उनले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन र पानीको मुहान व्यवस्थापन दुवै अहिलेको आवश्यकता भएको बताए ।
‘पहिलो प्राथमिकता खानेपानी हो । घुम्न आउनेलाई पनि हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,’ प्रमुख आचार्यले भने, ‘मुहान सफा राख्ने कुराको विकल्प खोज्नुपर्छ, त्यसका लागि सूचना पाटी, डस्वीन राखेर पर्यटनलाई पनि बचाउनु छ ।’
पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विस्तारै स्थापित हुँदै गइरहेको बाहुनडाँगीको झरना व्यवस्थापन र संरक्षण गर्न रोङ गाउँपालिकासँग पनि छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगिने उनले बताए । पर्यटन विकास र शुद्ध खानेपानीका लागि विज्ञहरुसँग छलफल गरेर समाधान निकाल्ने उनको भनाई ।जनसंसद् बाट